कांग्रेसले ल्यायो १४ औं अधिबेशनमा नयाँ नियम – Mero Pradesh
कांग्रेसले ल्यायो १४ औं अधिबेशनमा नयाँ नियम
३२ श्रावण २०७८, सोमबार mero
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १४ औं अधिबेशनमा बिधान संशोधन गर्दै नयाँ नियम ल्याएको छ । यस पटकको अधिबेसनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको कार्यसमिति अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्न पाउने गरी विधानमा संशोधन गरेको छ ।
१३ औं महाधिबेसन सम्म सबै क्रियासिल सदस्यहरुले अधिबेसनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको कार्यसमितिमा मतदान गर्ने ब्यवस्था रहेको थियो । विधानमा भएको क्रियाशीलले चयन गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै कांग्रेसले उक्त निर्णय गरेको हो । शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सभापतिबाहेक कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको उम्मेदवार भने क्रियाशील सदस्य पनि बन्न पाउँछन् । यसका लागि मतदाता भने वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
‘विधानको धारा ८ (१) (क) र धारा ९ (१) (ख) मा उल्लेख गरिएको क्रमशः ‘गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य गाउँपालिका अधिवेशनका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य नगरपालिका अधिवेशनका सदस्य’ भनिएकोमा ‘गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनी संशोधन गर्ने,’ कांग्रेसले भनेको छ । यो संशोधनलाई आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समितिले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिका केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाव समेट्ने गरी पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेसले समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवको परामर्शमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाललाई परिमार्जनको जिम्मा दिएको छ । उनीहरुले भदौ १ गते निर्देशिकामा परिमार्जन गरेर भदौ २ गते पार्टी सभापतिलाई बुझाउनुपर्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
कांग्रेसले मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी शनिबार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । छैटौं पटक सार्वजनिक कार्यतालिकाका अनुसार वडा अधिवेशन भदौ १८ गते हुनेछ भने पालिका अधिवेशन भदौ २७ र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १ गते हुने छ ।
नेपालीको उद्धार गर्न सरकारद्वारा समिति गठन
कोरोना संक्रमणबाट रामेछापमा एक जनाको मृत्यु
नेकपाका केन्द्रीय नेता चढेको गाडी तोडफोड
१० फाल्गुन २०७७, सोमबार mero
राप्रपाको एजेन्डा र मार्गचित्रले मात्र मुलुक बच्न सक्छ ः कमल थापा
८ पुष २०७७, बुधबार December 23, 2020 mero
ओलीको कदम विरुद्ध १७ बुदे बुँदे प्रस्ताव पारित
रामेछापबाट संविधान दिवसको अवसरमा १३ जना कैदी छुटे
मैत्रीपूर्ण खेल रामेछापमा सम्पन्न
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सैजू रामेछाप बाट बिदाई
आयआर्जनको क्षेत्रमा यस वर्ष बढी प्राथमिकता ः मेयर बस्नेत
सालकको खपटासहित रामेछापमा दुई जना पक्राउ
जीप दुर्घटनामा तीनको मृत्यु, एक घाइते
कृषि उपकरण तर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो
बालिका जर्बजस्ती गर्न खोज्ने युवक प्रक्राउ